Matambo matsva eApple Watch mune yakasvibiswa silicone kubva kuna Nomad | Ndinobva mac
Matambo matsva eApple Watch mune yakasvibiswa silicone kubva kuna Nomad
Iko hakuna zuva rekuti isu tinosevha paInternet uye isu hatiwane mikana mitsva yeApple Watch yeavo vanobva kuCupertino uye ndezvekuti zvakare tinokuudza kuti zvese zvinofanirwa kuita Nenyika yeapuro yakarumwa, mazuva ano, yakafanana nebhizinesi rakachengeteka.
Izvi zvinozivikanwa nevagadziri vezvishongedzo uye Nomad akatanga kushanda kuti aratidze modhi nyowani yeyakaomeswa silicone tambo iyo vazhinji vashandisi veApple Watch vachada. Nhasi tinopa sarudzo nyowani yekutarisa kana iwe uchida kuwana mamwe mabhande eApple Watch yako, ingave yekutanga modhi yakavambwa kana iyo nyowani yeApple Watch Series 1 uye Series 2.
Anogadzira zvishandiso Nomad afunga kupinda mumusika weApple Tambo netambo nyowani yesilicone tambo, asi kwete chero silicone uye chero ruvara. Iyo silicone yakave yakaomeswa, ichiwedzera kusimba nekufamba kwenguva kuve nekuwedzera kwemakemikari ekuwedzera mune ayo maitiro ekugadzira.
Nomad anotsanangura pane yayo webhusaiti:
Uye zvakasiyana neepetroleum-based rubbers ayo akazara nemakemikari, silicone yakasikwa yakaderera chepfu uye zvakasikwa hypoallergenic hunhu hunoita kuti ive chinhu chakanakira chigadzirwa chinowirirana nekubatana neganda rako.
Uye zvakasiyana neepetroleum-based rubbers, ayo akatakurwa nemakemikari, aya mabhandi ane huturu hwakaderera sezvo zvisikwa silicone yakashandiswa iyo inozvipa zvakasununguka hypoallergenic maficha ayo anoita icho chinhu chakanakira chigadzirwa chechigadzirwa chinogara chiri chinosangana neganda rako.
El chete ruvara rwuripo nekuti ikozvino ndizvozvo rima ine mudziyo wekusimbisa mune dema kana sirivheri grey, zvakare iri yega chiyero chiri kutengeswa yeiyo 42mm modhi pamutengo we35,87 euros.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Matambo matsva eApple Watch mune yakasvibiswa silicone kubva kuna Nomad
Ndekupi kuri yese Safari kubhurawuza mapassword akachengetwa?
ArtPC Pulse, Samsung yazvino kopi ndeyayo yega Mac Pro